फेरि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : कुन देशको कति पुग्यो ? – Taja Khawar
फेरि बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : कुन देशको कति पुग्यो ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०३, २०७८ समय: १२:०७:१०
विदेशबाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको विनयमदर
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । तोकेको विनिमय दर अनुसार आज आज डलरको भाउ शनिबारकै झैँ स्थिर रहेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ ।
बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ ।यसैगरी युरो एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुन देशको मुद्राको दर कति ?
सरकारले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय उडान सङ्ख्या थप गरी नयाँ तालिका नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानलाई पठाएको छ ।
Last Updated on: July 18th, 2021 at 12:08 pm